JPN ၂၀၂၁၀၃၀၄မတ် ၄, ၂၀၂၁
NGA ၂၀၀၈၀၇၂၆ဇူလိုင် ၂၆, ၂၀၀၈
↑ Shiloy၊ Anton (26 February 2007)။ Sony Removes Emotion Engine, Graphics Synthesizer from PAL PlayStation 3။ X-bit labs။ 26 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Guinness World Records 2009 Gamer's Edition။ pp. 108–109။ ISBN 1-904994-45-8။ GTA: San Andreas is the best-selling PlayStation2game, withamassive 17.33 million copies sold.
↑ Makuch၊ Eddie (February 15, 2011)။ 155 million PS2 units shipped worldwide – News at GameSpot။ Asia.gamespot.com။ 22 March 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 27, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပလေးစတေရှင်_၂&oldid=623922" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၈:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၈:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။